Otu okirikiri nke Steroid ga-emerụ gị ahụ - BikeHike
Enwere ike iji steroid mee ihe n'enweghị nsogbu?
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbakee site na okirikiri steroid?
Ị nwere ike ịnọ na steroid ruo mgbe ebighị ebi?
Cretine ọ dị mma ka steroid?
HCG ọ ga-abawanye nha mpi nwa?
testosterone m ọ ga-alọghachi?
Kedu ihe kacha nso iwu steroid?
Kedu ka ị ga-esi were okirikiri steroid mbụ gị?
Ndị steroid na-eme ka ị na-eto ngwa ngwa?
Ogologo oge ole ka ị ga-eji steroid n'enweghị nsogbu?
Ego ole ka steroid dị mma?
Gịnị kpatara creatine ji dị njọ maka gị?
Creatine ọ dị mma maka ụmụaka dị afọ 16?
Ị bụ Natty na creatine?
Enwere usoro onunu ogwu maka anabolic steroid? Enweghị ọgwụ 'nkwado' nke steroid anabolic. Ọ bụrụ na ị na-aga n'ihu na-eji steroid, n'agbanyeghị ịdọ aka ná ntị ahụike na ndụmọdụ ndị dọkịta gị, Otú ọ dị, debe dose ahụ ka ọ bụrụ nke kacha nta ma na-ezumike site na iji steroid.
Mwepụ site na steroid anabolic Ọ nwere ike were ọnwa 4 iji weghachi ọkwa testosterone eke mgbe ọ nọsịrị na steroid anabolic ruo ogologo oge. Ihe mgbaàmà ịwepụ na steroid nwere ike ịgụnye: ike ọgwụgwụ.
I kwesịghị ịkwụsị n'onwe gị ọbụlagodi na ahụ gị dị gị mma. Ọ bụrụ na ị na-eji steroid ihe karịrị izu ole na ole (ma ọ bụ otu izu n'ihe gbasara prednisone 40 mg kwa ụbọchị ma ọ bụ karịa) ị ga-achọ iji nwayọọ nwayọọ belata dose ahụ tupu ịkwụsị kpamkpam.
Creatine na anabolic steroid bụ otu ihe Ụgha! Creatine enweghị ihe jikọrọ ya na steroid nke anabolic, nke yiri ma ọ bụ na-eṅomi testosterone iji kwalite uto ahụ ike ma kwalite ịrụ ọrụ anụ ahụ. Creatine na-enye uru ahụ gị ike karịa, ma ọ bụ na-enyere ha aka imepụta ya.
Ha kwuru na ọgwụgwọ hCG mụbara olu testicular site na 5.5 (pretreatment) ruo 10.8 mL (kachasị) n'oge ọgwụgwọ yana na ụmụ nwoke niile nwetara ọkwa testosterone nkịtị mgbe ọgwụgwọ hCG gasịrị. N'oge ọgwụgwọ hCG, 14 n'ime ndị ikom iri abụọ na abụọ ahụ nwere ọdịdị spam dị mma na semen ha.
Ọgwụgwọ maka testosterone dị ala bụ usoro na-aga n'ihu ma na-aga n'ihu ogologo oge. Dị ka ọ dị n'ọtụtụ ọnọdụ ndị ọzọ na-adịghị ala ala, ọ bụrụ na ịkwụsị ọgwụgwọ ahụ, nsogbu ahụ ga-alaghachi - ọkwa testosterone gị ga-adaghachi azụ n'okpuru ọkwa nkịtị.
Ihe mgbakwunye Steroid kacha mma: ọkwa #1 D-Bal Max: Nhọrọ maka Dianabol na Nhọrọ Steroid kacha mma. #2 Testo-Max: Nhọrọ na Sustanon. #3 HyperGH 14X: Nhọrọ na HGH Injections. #4 Clenbutrol: Nhọrọ ka Clenbuterol. #5 Winsol: Nhọrọ na Winstrol.
Ná mmalite nke okirikiri, onye ahụ na-amalite na obere doses nke ọgwụ ndị a na-achịkọta wee jiri nwayọọ nwayọọ na-abawanye doses. N'ọkara nke abụọ nke okirikiri, a na-eji nwayọọ nwayọọ belata dose ahụ ka ọ bụrụ efu. Nke a na-esote mgbe ụfọdụ okirikiri nke abụọ nke onye ahụ nọgidere na-azụ ma na-enweghị ọgwụ.
Iji ọgwụ anabolic eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi nwekwara ike igbochi uto nke ndị nọ n'afọ iri na ụma. Steroid nwere ike ime ka ọkpụkpụ aka nká.
Iji steroid mee ihe karịrị izu abụọ nwere ike ibelata ikike ahụ gị ịzaghachi na nrụgide anụ ahụ. Enwere ike ịchọrọ ọgwụ steroid dị elu n'oge nrụgide siri ike, dị ka ịwa ahụ ma ọ bụ ọrụ eze buru ibu ma ọ bụ ọrịa siri ike. Nke a nwere ike ịdị mkpa ruo ogologo oge otu afọ mgbe ị kwụsịrị steroid.
Ihe na-erughị 7.5 mg kwa ụbọchị ka a na-ewerekarị dị ka obere dose; ihe ruru 40 mg kwa ụbọchị bụ obere dose; na ihe karịrị 40-mg kwa ụbọchị bụ nnukwu dose. Mgbe ụfọdụ, enwere ike inye nnukwu ọgwụ steroid maka obere oge.
Dabere na onye ị na-ajụ, mmetụta ndị a tụrụ aro nke creatine nwere ike ịgụnye: mmebi akụrụ. Mmebi imeju. Nkume akụrụ.
Ma Ụlọ Akwụkwọ American Academy of Pediatrics na American College of Sports Medicine kwekọrịtara na ndị nọ n'afọ iri na ụma ekwesịghị iji mgbakwunye na-akwalite arụmọrụ, gụnyere creatine. Gwa onye na-eme egwuregwu dị afọ iri na ụma gbasara ya.
Ị bụghị ihe okike / natty ma ọ bụrụ na ị na-ewere Protein Powders, Creatine, Pre-Workout, SARMS, ROIDS, wdg.
Otu okirikiri nke Steroid nwere ike imerụ gị ahụ
Azịza ngwa ngwa: Otu okirikiri nke Testosterone ga-emerụ gị ahụ
Ajụjụ: Otu esi agba Steroid
Steroid nwere ike imetụta okirikiri ịhụ nsọ
Otu esi agbagharị steroid n'enweghị nsogbu
Ogologo oge ole Testosterone Cycle
Azịza ngwa ngwa: Otu esi agbagharị Testosterone
Ogologo oge ole bụ okirikiri steroid